BUDDHIST TERMS' Dictionary: BEGGING SOMEONES PARDON - ခမာပန၊ ကန်တော့တောင်းပန်ခြင်း
BEGGING SOMEONES PARDON - ခမာပန၊ ကန်တော့တောင်းပန်ခြင်း
ခမာပန (Khamᾱpana) - သည်းခံစေခြင်း၊ တောင်းပန်ခြင်း၊ ကန်တော့ခြင်း။
ကာယကံပြစ်မှု ၀စီကံပြစ်မှု တစ်ခုခုကို ပြုမိပါက မိမိပြစ်မှားမိသောသူအား တောင်းပန်မှု ကန်တော့မှုကို ပြုရမည်ဟု မြတ်ဗုဒ္ဓက ဆုံးမခဲ့သည်။ တောင်းပန်ခြင်း၊ ကန်တော့ခြင်းကို ပြုလိုက်သဖြင့် မိမိပြစ်မှားမိသော အပြစ်များ ပပျောက်ငြိမ်းအေး သွားနိုင်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် အခါကြီး ရက်ကြီးများ၌ မိဘ ဘိုးဘွား ဆရာသမား သက်ကြီးဝါကြီးသူတို့အား ပစ္စည်းဝတ္ထုဖြင့် ကန်တော့မှု ပြုကြသည်။ အစဉ်အလာကောင်းသော ထိုသို့ ကန်တော့လိုက်ခြင်းဖြင့် ကောင်းကျိုးချမ်းသာ မင်္ဂလာများကို ရရှိရုံသာမက ပြစ်မှု တစ်စုံတစ်ခု ရှိနေပါကလည်း ပပျောက် ငြိမ်းအေးသွားတော့သည်။ မိမိအပြစ်ကို ဖွင့်ဟ၀န်ခံ၍ တောင်းပန်ခြင်းသည် ကြီးပွား တိုးတက်ကြောင်း ဖြစ်၏။
BEGGING SOMEONES PARDON
Asking forgiveness, paying homage
The Buddha taught thataperson, who commits an offence against someone, either bodily or verbally, should beg his pardon or make obeisance to alleviate the offence. Myanmar Buddhists traditionally pay homage to their grandparents, parents, teachers and elders on auspicious occasions and festive days, such as Full Moon Day of Wazo and Full Moon Day of Thadingyut. They retain this good tradition and believe that by doing so, they can gain benefits and be absolved of any offence they might have committed. Owning up to an offence and asking forgiveness promote prosperity.